Rating: SKU: 97240-79-4. Category: ndị ọzọ na-
Usoro Molecular: C12H21NO8S
Molekụla arọ: 339.36
Ihe ọdịdọ ahụ bụ n'ihi ọrụ na-adịghị mma ("ọgbụgba") nke irighiri akwara dị n'ụbụrụ, na ọrụ na-adịghị mma na-agbasa n'akụkụ obere ma ọ bụ karịa nke ụbụrụ. Ọ bụ ezie na usoro nke Topiramate ntụ ntụ adịghị ama ama, ihe ọmụmụ sayensị na-egosi na ọ nwere ike ịgbanwe ntụgharị ụbụrụ n'ime ụbụrụ. Neurotransmitters bụ kemịkalụ nke irighiri akwara ma jiri ya kpọtụrụ akwara ndị ọzọ dị nso. Site n'ịgbanwe mmepụta ma ọ bụ omume nke ndị na-ahụ maka ntanetị, Topiramate ntụ ntụ nwere ike igbochi ọrụ na-adịghị mma nke irighiri akwara na ụbụrụ nke na-akpata njide ma ọ bụ nwere ike igbochi ọrụ na-adịghị mma ịgbasa na akwara ndị ọzọ. Ọmụmụ ihe ndị ọzọ na-egosi na ntụ ntụ Topiramate ntụ ntụ nwere ike igbochi akwara ahụ ozugbo (yabụ, ọ bụghị site n'ịgbanwe ntụgharị) ma mee ka ha ghara ịmị ọkụ.
Soro ntuziaka dọkịta gị. Kpọọ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Ọtụtụ mgbe, dọkịta gị ga-agwa gị ka ịmalite site na iji otu mbadamba-milligram 25 ugboro abụọ kwa ụbọchị. Mgbe obere oge gachara, dọkịta nwere ike jiri nke nta nke nta bulie usoro onunu ogwu iji chịkwaa njide gị. N'ihi na a na-ewere ntụ ntụ Topiramate ugboro abụọ n'ụbọchị, ọtụtụ ndị na-enyere onwe ha aka icheta site n'iji ya nri ụtụtụ na nri abalị. Jụọ dọkịta ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịchefu ị takeụ ọgwụ.
Formsdị Topamax abụọ nwere ike iwere ya na nri ma ọ bụ na-enweghị nri, mana ọ kachasị mma ịdị na-agbanwe agbanwe kwa ụbọchị.
Kpachara anya ma ọ bụrụ na dọkịta ede ọgwụ ọhụrụ na-eji ụdị dị iche iche nke mkpụrụ ọgwụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eji mbadamba 25-mg na ndenye ọgwụ ọhụrụ bụ maka mbadamba 100-mg, kpachara anya iji nọmba ziri ezi. Adịla na-akpaghị aka na-eji otu ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ọgwụ dị ka na mbụ. Jide n'aka na ị maara ụdị mbadamba e kenyere.
Ọ bụrụ na ị na-ewere mbadamba, lodaa nke ọ bụla. Ekwula ya. (Ọ ga-abụ ezigbo ilu.)
Ngwunye capsules bụ ụzọ dị mfe iji nye Topamax ụmụaka na ndị ọzọ nwere nsogbu ilo ọgwụ. Enwere ike ilo capsules ahụ dum, mana a na-emeghe ha ma fesa ihe ndị ahụ na teaspoon nke nri dị nro dịka applesauce, custard, ice cream, oatmeal, pudding, or yogurt. Lee usoro:
Jide capsule ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ ka ị nwee ike ịgụ okwu “TOP.”
Wụsaa ọdịnaya niile nke capsule ahụ na nri.
Ghaa ihichacha ya niile n’egbughị ya. (Ọ ga-atọ ilu ma ọ bụrụ na a taa ya.) D Dụ mmiri ma ọ bụ mmiri ọzọ ozigbo nwere ike inye aka hụ na eloro nri niile. Echekwala ọgwụ ọ bụla agwakọtara na nri iji meechaa.
Topiramate ntụ ntụ nwere ike imebi nwa a na-amụbeghị amụ, mana ịnwe njide n'oge ime ime nwere ike imerụ nne na nwa ahụ. Gwa dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị dị ime mgbe ị na-ewere Topiramate ntụ ntụ maka ọdịdọ. Amalitela ma ọ bụ kwụsị ịnara Topiramate ntụ ntụ n'oge ime n'afọ na-enweghị ndụmọdụ dọkịta gị.